Mayelana nokusetyenziswa kweetayibhile kwizonyiso zasekhaya, uya kufunda ngokucacileyo kwinqaku elithi "». Iyeza lonyango linika ezininzi zokupheka zokubhaka. Iibhatatesibini isonka sesibini kunye ne-cosmetologist yokuqala. Kuhlala kusekhona, kunye neendlela zokupheka zamatatye ezihle zilula kwaye ziyafumaneka. Kukulungele ukuwasebenzisa kwiintsuku zasebusika ezibandayo, xa ulusu luba yimozulu-olutshitshisayo, olomile kakhulu kwaye lubaleka. Iinkcukacha zifunde kwinqaku ngesihloko esithi "Iitatayi, yiyiphi imilinganiselo eyenziwa ngumntu njengonyango".
Iipatato eziyi-potato ziqulethe ixabiso elincinci (15-25%), iiprotheni, izinto ze-pectin, i-acid acids (i-citric, i-malic, i-oxalic), iivithamini C, B1, B2, B6, PP, i-carotene, i-folic acid. Iitatata zizityebi kwi-potassium, iqulethe uluhlu oluninzi lweemveliso ezinokusetyenziswa. Iifatata ezingcolileyo ziyanciphisa ukuvuvukala nokuvuvukala kweentloko zeelesi. Xa ukukhukhuma kweenkophe, i-gruel ezivela kwiitapile ezitshiziweyo zitsha zifake kwi-napkin ye-napkin kwaye zibeke iipilisi zemizuzu eyi-15-20. Ngokuqhaqhazela, unako ukugcoba iibhokhwe ngekhilimu enomsoco. Gxuma ngamanzi apholileyo, itiye okanye i-chamomile infusion.
• Uhlambulule isikhumba esinamafutha esitrato esivela kwi-slurry encinci yee-potato ezidityanisiweyo ezixutywe kunye nesiqingatha se-white whites etyaspoon ye-honey (kungekhona wonke umntu onokunyamezela ubusi - ungayifakela isipuni se-oatmeal nge-pinch soda). Hlanganisa umxube ebusweni bakho imizuzu engama-20, hlambulula ngamanzi kwiqondo lokushisa.
• Ikhumba elomileyo liza kuhlaziywa yimaski ephuma kwi-slurry enye ye-tuber tuber, edibeneyo i-teaspoon ye-ukhilimu kunye namaconsi ambalwa eoli yemifuno.
• Ukuba ulusu luba lukhuni, lube lukhuni, lubomvu, lukhuni, emva kwe-10-15-minute-handbaths kwi-decoction decoct of the litatoes kuya kunceda. Emva kwesitya, gcoba izandla zakho nge-cream cream kwaye ufake iiglavu.
• Iifatata ezibilisiwe ziyancwina ulusu. I-Puree ibizwa ngokuba yi-balmam ye-mbatata yesikhumba esicasulayo, ngoko ke, i-puree, iphekwe kwiifatata ezibilisiwe, ubisi kunye nebhotela, isebenza kwisimo sezulu-esitshitshiweyo okanye esinyakanyiswayo-esi sihlamba sinyusa, sondla, sitshintshisa isikhumba, sitshisa imicu. Emva kweminyaka engama-50, isiskiti sezambatho ezisileyo sinceda ekusebenziseni ubuso.
• Ngokukhawuleza isusa ubuqhophololo, iguqula imibimbi, ivuselele isikhumba saluphi na uhlobo lwesigqubuthelo, apho iitatata ezihlutshiwe zibilisiwe kwincinci yobisi kwaye ixutywe. I-gruel efudumeleyo ibangelwa ebusweni.
• Ukunciphisa imibimbi entanyeni, xuba amazambane ahlambulukileyo kunye nepunipoon yeoli yemifuno okanye enye iqanda elibethiwe. Faka isicelo esitshisi esishisayo entanyeni, ukusuka kwindawo ephezulu yenziwe nge-napkin yengubo yekotoni, emva kwemizuzu engama-20, hlamba imaski ngamanzi afudumele.
Ekubeni phakathi kwezilwanyana zonyango ezinama-tuber tubers ezifana nokulwa nokuvuvukala kunye nokulimala, akumangalisi ukuba iifatata sele zisetyenzisiwe kwizilumkiso zasekhaya. Kwimichiza yomntu, zombini iifatata ezibhakabhaka neebilisiwe zisetyenziselwa iinjongo zokuzilungisa. Iitatayi ezinamaqabunga ziya kunciphisa isikhumba esicasulayo kunye nokunciphisa ukuvuvukala. Isetyenziswe ngendlela ye-gruel okanye ijusi, okanye sebenzisa iinqomati ezitsha. Ngamayeza omntu, amazambane amnandi (ahluthiweyo okanye anqunywe kwisiqingatha) asetyenziswa ukutshisa, kuquka ilanga, i-eczema, iifowusi ezibuhlungu, kwaye ulisebenzise kwizilonda ze-trophic. I-Kashitsu yamatyuba isetyenziswe kwi-napkin ye-gaukin enobubanzi obuyi-1 cm ubukhulu kwaye isetyenziswe kwindawo echaphazelekayo, emva kweeyure eziyi-1-2 i-napkin ithathelwa indawo entsha. Kulo busuku i-compress isuswe, indawo yengxaki ibanjwe ngamathambo angathathi hlangothi, nangomso olandelayo, enye i-gruel yembatata isetyenziswa kwakhona. Ngokufanayo, ijusi yezambane zingasetyenziswa. Ukuba usatshiswa ekhitshini, kuya kuzinza intlungu kwaye kukuthintele ukubonakala kwebhanti ngokukhawuleza kwandelwa kwindawo echaphazelekayo yezambatho ezigayiweyo, okanye nje uceke lwesitata. Impumlo ephilileyo ikwaphathwa kunye namazambane eluhlaza, okanye ngokuchanekileyo - ukuxubusha kwijusi yezambatyambo. Ukususa iipilisi zigcobe ngejusi kwi-peel entsha yeetayibheyi 4-5 amaxesha ngosuku. Ngoku uyazi indlela yokusebenzisa amazambane ekunyamekeleni, yiyiphi ixabiso le mifuno enomntu njengonyango.
Indlela yokurhoxisa i-zhirovikov: iingcebiso zamachiza endabuko
I-Vitamin isela kwiSuku sikaValentine
Indlela yokugcina imilenze yakho iphilile kwaye inhle?
Imilenze efanelekileyo - yonke ihlobo ebonakalayo
Pancakes nge jam
Indlela yokufaka i-blusher ngokuchanekileyo
Kissel kusuka kwi-currant